Vonoan’olona feno habibiana: voaheloka higadra mandra-pahafatiny i Tsilavina | NewsMada
Nomelohin’ny Fitsarana ady heloka bevava ao Toamasina nandritra ny fitsarana ny antontan-taratasin’ady laharana faha 247-Toa/19 mirakitra ny raharaha vonoan’olona nahafatesana renim-pianakaviana bevohoka sy ny zanany lahy efa-taona tao Analankinina Hopitalibe Toamasina, ny alin’ny 18 marsa 2019 i Nomenjanahary Tsilavina, 22 taona…
Tsy nitsitsy tamin’ity jiolahy raindahiny ity ny Fitsarana nandritra ny fotoam-pitsarana ity raharaha vonoan’olona ity. Niaiky ny heloka vitany teo anoloan’ny fitsarana i Nomenjanahary Tsilavina fa izy tokoa no nahafaty an’i Kalo Henriette telo mianaka, tamin’io fotoana io. Naverin’ity jiolahy ity ny fomba rehetra nanatontosany an’io heloka bevava io. Nolazainy fa novelesiny tamin’ny baratamiagna (hazo fanao hidim-baravarana) ilay renim-pianakaviana raha iny resitory ary notsindrominy tamin’ny « fourchette » teo amin’ny ambavafony. Taitra ary nitomany ilay zazalahikely zanany ka nolerany tamin’ny « fourchette » ihany koa ny lohany ary notsatohany antsy teo amin’ny masony, raha ny fanazavany manoloana ny fitsarana. Tsy vitan’izay fa mbola notsatohany antsy koa ny fon’ilay renim-pianakaviana ary niverenany fanindroany koa ilay zazalahikely ka namoy ny ainy avy hatrany izy telo mianaka. “Nentiko avy hatrany ny finday roa an’ilay ramatoa sy ny vola 17 000 Ar hitako tao an-trano. Namidiko ilay finday ary lafoko 24 000 Ar ka nahafahako nandositra tany Antanambao Manampotsy”, hoy ny fanazavany. Tany rahateo izy no voasambotra, ny 15 avrily 2019. Amin’ny fitsarana dia vonoan’olona efa nomanina mialoha sy fanaovana herisetra narahina fampijaliana no nataon’i Tsilavina. Nandritra ny fandaharana no nahalalana, araka ny fanambarana nataon-drainy monina any Antanambao Manampotsy fa efa namono olona tany an-toerana io zanany io ka tsy te handray andraikitra hikarakara azy amin’izao vonoan’olona nataony izao intsony izy.
Navotsotra i Tanteliniaina Rakotonoely…
Tamin’io fandosirany tany Antanambao Manampotsy io no nahitany asa tao amin’ireto olona niharam-boina ireto, kanjo herisetra niaro fahafatesana no setrin’ny fiantrana nataony tamin’ireto fianakaviana ireto. Ilay raim-pianakaviana rahateo mbola tany am-panangonam-bokatra ka izy telo mianaka no nanamparan’ity jiolahy ity ny herisetra tao an-trano.
Tamin’ny fisamborana ity jiolahy ity, voasambotra niaraka taminy koa i Tanteliniaina Rakotonoely izay mifanolo-bodirindrina amin’ireo niharam-boina ihany. Mialoha ny nisehoan’ity vonoan’olona ity, nisy fotoana niaraka teny amoron-dranomasina izy roa lahy. Nandritra ny fifandaharana no nilazan’i Tsilavina fa nisy fifamaliana teo aminy sy i Tanteliniaina sy ramatoa Kalo Henriette, ny takarivan’ny nisehoan’ny famonoana. Raha iverenana, anisan’ny fotoam-pitsarana naharitra ity fitsarana ity ho an’ny Fitsarana ambony sampana ady heloka bevava satria tamin’ny 11 ora sy 20 mn no niantomboka izany ary tsy nifararana raha tsy tamin’ny 1 ora sy 35 mn. Taorian’ny fandinihan’ny mpitsara ity raharaha ity, nivoaka ny didy mavesatra fanamelohana asa an-terivozona mandra-pahafaty ho an’ity jiolahy ity raha nohafahan’ny fitsarana kosa i Tanteliniaina Rakotonoely, namany. Tsy nahafaly ny fianakavian’ireo niharam-boina ity fanomezan’ny fitsarana fahafahana ity namany ity.